गुण्डा नाईके घैंटेले लगानी गरेका ठाउँहरु खुल्यो, कहाँ कहाँ रहेछन लगानी ? - Himalayan Kangaroo
गुण्डा नाईके घैंटेले लगानी गरेका ठाउँहरु खुल्यो, कहाँ कहाँ रहेछन लगानी ?
Posted by Himalayan Kangaroo | १७ भाद्र २०७२, बिहीबार ०४:२१ |
गुण्डागर्दी गरी घैंटेले थुपारेको अकुत सम्पत्ति बिना प्रमाण परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई जानकारी नगराई अबैध रुपमा लगानी गर्दै आएको खुलेको छ । स्रोतका अनुसार घैंटेले गजुरमुखी निर्माण सेवा सबै एकलौंटी गर्ने रणनीति अनुसार सबै साझेदारलाई भुक्तानी चुक्ता गरिसकेका थिए । तर उनी इन्काउन्टरमा परेपछि उक्त कम्पनीमा कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीको परिवार र दिपक गौतम परिवारको हालिमुहाली हुने भएको छ ।
त्यस्तै लाजिम्पाटमा रेष्टुरेन्ट घैंटेले रमेश कार्कीको नाममा खोलेका थिए । रेष्टुरेन्टसगै ट्राभल्सको काम गर्दै आएका कार्कीको अनुसन्धानको क्रममा अस्वभाविक कारोबार देखेपछि उनलाई महानगरिय अपराध महाशाखाले नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले घैंटेको सबै बैंक खाता राष्ट्रबैंक मार्फत मागिसकेको छ ।
नेपाली काग्रेसका नेता तथा सभासद धनराज गुरुङले घैंटेसँगै सापटी भन्दै पटक–पटक गरेर २५ लाख लिएको घैंटे निकट स्रोत बताउछ । नेपाली कांग्रेस खेलकुद् बिभाग प्रमुखसमेत रहेका गुरुङले नियमावली बिरुद्ध घैंटे लगायत अन्य दश जनालाई खेलकुद बिभागको सदस्य बनाएका थिए ।
पार्टीको बिधान अनुसार २० जना कार्यसमिती हुने बिभागमा गुरुङले आफू अनुकुल थप १० जना सदस्य भित्र्याएका हुन ।
पार्टीको बिधान बिपरित बनाएका सदस्यहरुमा कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’, राजु श्रेष्ठ, सिंहबहादुर राणा मगर, तारा गुरुङ, देबेन्द्र शेरचन, चर्जु नारायण श्रेष्ठ, सम्यी तामाङ लगायत छन् । घैंटे जस्ता कहलिएका गुण्डालाई राजनीतिक संरक्षण र पद उपलब्ध गराउादै गुरुङले मनग्य असुल्दै आएका थिए । स्रोतका अनुसार गुरुङले सदस्य बनाए बापत घैंटेसँग ५ लाख लिएका थिए ।
त्यस्तै चन्दन तस्कर बिक्रम लामा र शान्ता महर्जनले घर जग्गाको कारोबार गर्ने भन्दै घैंटेसाग एक करोड लिएको अहिले खुलेको छ ।
घैंटेका सहयोगी समिरमान बस्नेत र प्रतिक श्रेष्ठलाई पनि झण्डै दुई करोड लगानी गरेको खुलेको छ।
Previousगौराको रौनकमा झुम्दै सुदुरपश्चिम
Nextसाउदी अरेबियामाथि नेपालको शानदार जीत
शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक : पण्डित
२३ भाद्र २०७१, सोमबार १८:०९
नेपालका प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपति भेट भएको स्थानमा नरेन्द्र मोदी छिरेपछि…
३० आश्विन २०७३, आईतवार ०२:००
सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा तेह्रको मृत्यु
१८ जेष्ठ २०७४, बिहीबार ०८:०५